Daalụ! Emebiri m ndị na-agụ akwụkwọ nri 700 na teknụzụ 2,000 nke Technorati! | Martech Zone
Daalụ! Emebiri m ndị na-agụ akwụkwọ nri 700 na Teknụzụ 2,000 Mark!
N’izu gara aga, m riri nri. Enwere m mmasị n'iji Technorati Rank dị ka ihe nduzi maka otu blọọgụ m siri nwee ihe ịga nke ọma yana ma ọ gara n'ihu na ọ ga-adị. Ruo ọtụtụ izu, ejiri m nkedo dị nso na ogo 2,000. Otu mgbe, etinyere m ihe ruru ihe karịrị 2,000…, emesia m buputara ruo 2,038. Ug. Ọ malitere ịmalite ịkwado m mkpụrụ. Anọ m na-ahụ ọnụ ọgụgụ ahụ 2,000 ebe niile.
2007 amacha ama n’oge ugbu a.
N'etiti ya niile, blọọgụ m mere peeji nke Slashdot (n'elu 100 na Technorati). Enwere m nkụda mmụọ… ọ bụrụ na Slashdot kpọtụrụ m na m ka na- enweghị ike ịgbaji 2,000 a ga-enwerịrị ihe Enwere m ike ime. Ma enwere!
My Strategy imebi site na Technorati 2,000 Mark:
Gini banyere iwere ozi m mutara na tweaking blog m ma nyere ndi ozo aka itinye ya na blog ha? Mgbe ụfọdụ ọ na-adị mfe ịgụ ndụmọdụ ahụ, mana itinye ya n'ọrụ nwere ike isi ike! N’ihi ya, ekpebiri m ịga Ndenye Blog. Echere m na ọ bụ egwuregwu dị ụtọ n'okwu - mana ka ọ na-efesa, ejirila okwu ahụ ntakịrị. Enwere m olile anya na m ga-atụgharị ya na ya. Naanị m na-enye ndị na-enyere ndị mmadụ aka aka na ịnye ndụmọdụ maka imeziwanye blọọgụ ha ma ọ bụrụ na ha kpọtụrụ m.
Enweghị ego, enweghị onyinye, enweghị asọmpi… naanị enyemaka efu. Nwa nwoke, ọ arụ ọrụ! Ekele dịrị gị, agbarịrị m site na ogo 2,000 ma nwee ike iwere ya gaa n'ihu. Ọ bụ usoro siri ike… Achọrọ m ịgụ, nyochaa ma nyochaa blọọgụ ọ bụla wee weta ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ. M na-agbalị ghara regurgitate na Atụmatụ - M n'ezie na-agbalị ịchọta pụrụ iche mbipụta ọ bụla blog m tipped.
Ọ bụ ihe ịma aka! Ana m amụta ọtụtụ ihe ugbu a, n'agbanyeghị. Otu abaghị uru: Ndị na - agụ akwụkwọ na - edegharị post m iji nweta ndụmọdụ blọọgụ, ha wee na - atụgharị blọọgụ m ma ha mezue mgbanwe ahụ! Nke ahụ bụ ihe m na-atụghị anya ya mana ọ nwere nnukwu mmetụta.
Ikekwe ihe ịma aka kasịnụ m nwere ịlụ di na nwunye bụ n'ọnụ Lendo.org, a blog na-adịghị ọbụna na Bekee! Agbanyeghi na m jiri ndị ntụgharị tụlee ụfọdụ ọdịnaya - ọ bụ naanị ịgbanye ihe isiokwu dị na blọgụ (ịgụ). Ozugbo m mechara post André na onye edemede ya bụ Daisy, ngwa ngwa emejuputa mgbanwe di itunanya - tinyere ederede mara mma nke na-eme ka ị nọrọ n’ụlọ ma dịkwa njikere ịgụ! Enweghị m ike ịnụ ịnụ azụ site na André na Daisy na otu blog si eme izu ole na ole site ugbu a.
Nsonaazụ (ruo ụbọchị):
Taa m kụrụ ihe mgbaru ọsọ abụọ - ndị na-agụ 700 na FeedBurner na adiyifo no de mfe 2,000 kaa ho Teknụzụ. Ekele dịrị ndị na - agụ akwụkwọ m, nke ọhụụ na nke ochie, maka inye aka kwọga m na akara ndị a!
Ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ m:
Ka ọ na-erule ngwụsị afọ, ọ ga-amasị m ịkwụsị ihe mgbochi 1,000 na-agụ akwụkwọ na ndepụta m ma ọ ga-amasị m ịkwọ ụgbọala na 1,000 Technorati Rank. Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị na-eche ịla. Achọrọ m ka ị rapara!
Amalitere m ide ihe…
Jul 11, 2007 na 11:35 PM
Grats na ihe ịga nke ọma gị, Doug!
Jul 12, 2007 na 7: 15 AM
Ọ gaghị abụ blog na-enweghị mkparịta ụka, Slaptijack! Enwere m ekele maka ìgwè dị ịtụnanya nke bara uru nke nyeworo aka na blọọgụ a. Echere m na nkwupụta bụ isi ihe dị mkpa maka ọganiihu ọ bụla. Ihe m kwuru na blọọgụ ndị ọzọ - na nke gị na nke m.
Ana m ekele unu niile. Agaghị m enwe ike ịme ya ma ọ bụrụ na unu ejighị nke ọma tinye mgbakwunye na mkparịta ụka ahụ!
Jul 12, 2007 na 12: 07 AM
Ekele m na ị nweta ebum n’uche gị… ha nwere ike inye gị nnukwu nsogbu mgbe ha mere ma mụ onwe m ga-anọrịrị mgbe ị na-eme ihe mgbaru ọsọ gị ọzọ.
Jul 12, 2007 na 7: 17 AM
Daalụ Steven! Gụọ ihe m kwuru na mbụ - ọ gbasara gị niile. Really na-eme nke a dị mfe karị!
Jul 12, 2007 na 12: 47 AM
Ọdịdị ọhụrụ ahụ na-amasị m!
Ana m mgbe niile tweaking!
Jul 12, 2007 na 1: 26 AM
Hụ nghazi ebumnuche gị. Debe ya, ị ga-erute.
Jul 12, 2007 na 7: 16 AM
Jul 12, 2007 na 6: 53 AM
Chaị! Nke a bụ nnukwu ihe nrite maka enyemaka ndị na-ede blọgụ site na ụwa niile, dịka m!
Mgbe nke a gasịrị, ị nwere ndị na - agụ akwụkwọ ọhụrụ abụọ, mụ na Daisy, mana anyị ga - akwado gị ka ị bụrụ ụmụ okorobịa! Ndị a 'ọtụtụ ụmụ okorobịa' ga-agwa ndị ọzọ 'ọtụtụ ụmụ okorobịa'.
Daalụ nke ukwuu! Ọ bụ uru gị! 🙂
Jul 12, 2007 na 7: 18 AM
Daalụ nke ukwuu maka ohere ị nyere m, André! Biko ka anyị mara ka ihe si aga.
Jul 12, 2007 na 7: 21 AM
N'ezie! Aga m na-na kọntaktị 😉
Jul 12, 2007 na 8: 31 AM
Obi ekele Doug !! =)
Jul 12, 2007 na 9: 26 AM
Daalụ Tony !!!
Jul 12, 2007 na 11: 29 AM
Ekele m. Ọ bụghị n’oge dị anya gara aga ka ị tụrụ akara ndị debanyere aha 500 ma tinyela 200 ọzọ na nke ahụ. Na-aga nnukwu ugbu a. Ọ bụ naanị oge tupu ị kụrụ ndị na - agụ 1000.
Jul 15, 2007 na 9:41 PM
O yiri ka ihe niile gbasara ike, ọ bụghị ya? Anọ m na-eme nkwusa nke ahụ nwa oge ugbu a - ọ na-atọkwa ụtọ etu o si na-eto.
Ọ bụrụ na m na-enyocha uto kemgbe mmalite ịhụ - mana echere m na ọ dị ka Fibonacci… 1,2,3,5,8,13,21…
Jul 15, 2007 na 6:43 PM
Ekele. Ekwenyesiri m ike na agaghị m aga ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na m mere, ị nwere ike ijide m mgbe ọ bụla na-eme ngwa ngwa na nnukwu aha.
Jul 15, 2007 na 9:42 PM
Daalụ, Tinu! Enwere m ekele maka nkwado niile. 🙂
Enwere m ịde blọgụ ruo ọnwa ole na ole ma m ka nọ n'okporo ụzọ na-adịghị mma ma enweghịkwa ike ịkwụsị dị ka ihe ị mere. Enwere m olileanya n'ezie na atụmatụ a ga-arụ ọrụ nke ọma maka teknụzụ m. Daalụ nke ukwuu 🙂